ATN: ရင်ထဲရှိတဲ့ မှတ်တမ်း
ရင်ထဲရှိတဲ့ မှတ်တမ်းကို လာဖတ်သွား။ ရှစ်ကြိမ်မြောက်တမ်းတခြင်းထဲက "နှင်း" ကိုကြိုက်တယ်ဗျာ။
စာအမြဲ လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းတွေလည်း နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။
မနှုတ်ဆက်ဖြစ်တာ စိတ်မရှိဘူးလို့ထင်ပါတ်ယ။
မှတ်တမ်းထဲမှာပါလို့ ၀မ်းသာပါတယ် အကို... ဆက်ရန်တွေ ရေးဖို့ အကြွေးရှိနေတယ်လို့ မှတ်မိပါတယ်။ ဆက်ရေးပေးပါဦးနော်... :)
အကိုရဲ့ မှတ်တမ်းက အကယ်ဒမီရလို့ ပြောသလိုပဲနော်... :P
သားးးးးးးးးးးးးးဓု...... သားးးဓု..... သာဓု
ရင်ဘတ်ချင်း ထုံကူးကြတာပေါ့အစ်ကိုရေ ...
မှတ်တမ်းထဲမှာ အမှတ်တရ ထည့်ထားလို့ ကျေးဇူးပါ ကို ATN. ရေးချင်တော့မှ ရေးချင်တာသာရေးပါ။ အားပေးတဲ့သူတွေ အများကြီး...
ဘယ်သူမှ စိတ်တသမတည်း အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး အကိုရေ..
အလုပ်များတဲ့အခါ ရှိမယ်၊ စိတ်မကြည်လင်တဲ့ အခါ ရှိမယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဘလော့လေးကိုတော့ တ၀ဲလည်လည် ပါ။
အကို့ရဲ့  ကမ္ဘာထဲက မှတ်တမ်းလေးမှာ ဘလော့ဂ်မောင်နှမတွေနဲ့ အတူ အသိအမှတ်ပြု ခံရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင် ၀မ်းသာတဲ့ အကြောင်းပြောပါရစေ အကိုအောင်သာငယ်....
အကို့ရင်ထဲက ထွက်လာမယ့် စာတွေကို အကိုအဆင်ပြေမယ့် အချိန် ဘယ်အချိန်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ရေးမယ်ဆိုရင် ဖတ်ဖို့အဆင်သင့်ပါဘဲ....
အကို့ရဲ့ စိတ်ထွက်ပေါက်ကို မျှဝေခံစားပေးမယ့် ရင်ဘတ်တူတဲ့  မောင်နှမတွေအများကြီးရှိနေပါတယ် ကိုအောင်သာငယ်ရေ....( ကျမလည်းအခုတလော စိတ်ရှုပ်စရာတွေများနေလို့ ဘလော့ဂ်တွေဘဲ လည်နေတာ ကြာပေါ့....အခုတော့ ဘလော့ဂ်စွဲနေပြီ...
ဘလော့ဂ်တွေ ဖတ်နေရရင် စိတ်ညစ်စရာတွေ ပျောက်သွားရောဘဲ...). စိတ်နောက်စရာတွေ ပြီးရင် အကြည်ဓါတ်လေးတွေလည်း လာဦးမှာပေါ့အကို....
အကို့ရင်ထဲကမှတ်တမ်းထဲမှာ ရှင်သန်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ....
Virtual World ဟုတ်ပါတယ်။ တဆက်တည်းမှာလည်း ရင်ဘတ်တူသူတွေ ဘလော့ကတဆင့်ပြောလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို နေ့စဉ်ဘ၀ထဲကို ခေါ်သွားတာ...သွားရင်းလာရင်းလည်း သတိရ.. တိုက်ဆိုင်ရင်လည်း သတိရ.. တမင်တကာလည်း သတိရ ပေါ့...ကြုံလာရင်လည်း ငါ့သူငယ်ချင်းက အဲ့လို..အဲ့လို..စာရေးပြီး ပြောထားတာလို့ ထည့်ပြောရတာ အမော (ဘလော့ထဲ ရေးထားတာတွေကိုလေ)။
(ဒီမှတ်တမ်းက ဂုဏ်ပြုစရာမလိုတဲ့ - ဂုဏ်ပကာသနတွေ မပါတဲ့ ရင်ထဲက မှတ်တမ်း ဆိုပါလား)
မှတ်တမ်းထဲမှာ ပါခွင့်ရလို့ ဝမ်းသာတယ်။
သို့သော် အကိုရဲ့ မှတ်တမ်းကို ဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာ တမျိုးလေးပဲ.. စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသလိုပဲ။ ပြီးတော့ ဘာလို့ အဲဒီလိုတွေ မှတ်တမ်းတင်နေရတာလဲ လို့ စဉ်းစားမိတယ်။
ဟိုလေ... အကို စိတ်ညစ် စိတ်တိုနေပြီး စာတွေများ ဆက်မရေးချင်တော့ဘူးလားလို့ တွေးနေမိတာမျိုးပါ။ အခုလို မှတ်တမ်းတင်မထားလဲ အကိုနဲ့အတူ အကို့ စာတွေ ကဗျာတွေ သီချင်းတွေကို အမြဲတမ်း ချစ်ခင်နှစ်သက်စွာ အားပေးနေတာပါ။
ရေးချင်စိတ်ရှိတဲ့ အချိန်မှာ ရေးချင်တာကိုသာ ဆက်ရေးပါလေ... အားပေးနေမှာ။
ဦးလေးကြီး ဦးအောင်သာငယ်မှတ်တမ်းမှာ တူမငယ်မဆုမွန်ကို ထည့်ထားလို့ ၀မ်းသာကြည်နူး ပီတိဖြစ်မိတော့ ဒီနေ့အတွက်တော့ ဒေါသနဲ့ မစတော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါ့ ဦးအောင်သာငယ်ရယ် တစ်နေ့တစ်နေ့ရင်ထဲကရှိတဲ့အတိုင်းသာ ချရေးလိုက်ရ ဒေါသသင့်တဲ့စာတွေ ထွက်လာမယ်ဆိုတာလေ
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် မှန်ထဲ မကြည့်ချင်ဘူး အချိုးမပြေလို့ :(
ဦးအောင်သာငယ် ရေ စာမရေးနဲ့ ကဗျာရေးပါ စောင့်ဖတ်နေမယ်
အကို့ ကမ္ဘာက အကြီးကြီး ပဲ..း)
အကို့ကို အမြဲ အားကျလေးစားခဲ့ရတာပါ
ဘလော်ဂါ တယောက် ဖြစ်ခဲ့ရတာမို့
အကို့ မှတ်တမ်းထဲ မှာ တရားဝင် ထပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကို..
မှတ်တမ်း ထဲ ထည့် အသိအမှတ်ပြု
ခံရတဲ့ အတွက်လဲ ကျေးဇူး ထပ်တင်ပါရစေ..
အကို့ အမာခံ ပရိတ်သတ် တယောက်မို့
အကို သီချင်းပဲ ဆိုဆို
စာတွေ ပဲ စီစီ
စိတ်ညစ်တဲ့ အကြောင်းပဲ ရင် ဖွင့်ဖွင့်
ပျော်တဲ့ အကြောင်းတွေ ပဲ မှတ်တမ်း တင်တင်
(အဲ.. ရီးစားဟောင်း အကြောင်းတွေ ပဲ
၀တ္တု ဆိုလဲ ၀တ္တုပေါ့ အကိုရာ..း)...)
နာလို ဘူးနော်..း)
ထိပ်ဆုံးနေရာရတော့.. မုန့်ကျွေးပါ..း)
မျက်နှာလိုက်ခံ ရလို့.. အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်တွားပါဒယ်။
မသက်ဝေ ပြောသလို..ဘဇာကြောင့် အခု လို မှတ်တမ်းတွေ ထုတ်နုတ် နေရပြန်သတုန်းလို့.. တွေးမိပြန်တယ်။
လူတိုင်းမှာ..အဆင်မပြေ..မပျော်ရွှင်တဲ့ အချိန်တွေ ရှိတတ်တာပါပဲ။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့..ကဗျာတွေ.. စာတွေ ဆက်ရေးပါအုံး..
သီချင်းတော့... အင်း..ဆက်ဆိုပါလေ..း)
( စိတ်ညစ်နေတယ် ဆိုလို့..နောက်တာပါ) ခွင့်လွှတ်ပါ။
နေအုံး- Virtual World ဆိုတာ..ကျမ ကိုယ်ပိုင် စကားလုံး မဟုတ်ရ ပါနော်။
အခုလို မှတ်တမ်းလေးထဲမှာ တခုတ်တရ ထည့်ထားပေးတာ
ကျေးဇူးပါ ။ ရေးသမျှ အမြဲအားပေးနေပါတယ် ။ ကောင်းသော နေဗျ ။း)
(စိတ်ညစ်ညစ် ၊ စိတ်ပျော်ပျော် ကဗျာတွေရေးပါ အကို့ကဗျာတွေကို ဆက်ဆက်မျှော်လင့်နေမယ် )
အခုတလော စာမေးပွဲ၊ Assignment နဲ့ Clinical သုံးခုဆိုင်ပြီး ဆက်တိုက် ဖြစ်နေလို့ ကျွန်မလာ တခါတလေ စာလာဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် မှတ်ချက်မရေးဖြစ်၊ နှုတ်မဆက်ဖြစ်တာတောင် အတော်ကြာနေပါပြီ။ ဘလော့ဂ်ကို စဖတ်ဖူးတဲ့ ၂၀၀၈ အစပိုင်းကနေ ကျွန်မလည်း ဘလော့ဂ်တွေကို ဖတ်လာခဲ့တာ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေ အတွေးအမြင်တွေ၊ ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေကို တိုက်ရိုက်တင်ပြချက်မို့လား မသိဘူး Formal literature တွေကို ဖတ်ရတာထက် ပိုပြီးအားရတယ်။ စာမေးပွဲတွေ Assignment တွေနဲ့ စာဖတ်ရများလွန်းလို့ စိတ်ပင်ပန်း၊ လူပင်ပန်းပြီး စာဆက်လုပ်လို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်လောက်အောင် အားအင်ကုန်ခမ်းနေ ချိန်မှာတောင်မှ ဘလော့ဂ် တခုခု မှာ အသစ်တင်ထားထဲ့ ပို့စ်တခုကို ၀င်ဖတ်ဖြစ်ရင် မျက်စိတွေ၊ စိတ်တွေ အလိုလို ပြန်ကြည်လာပြီး စာဆက်လုပ်လို့ ရသွားတာမျိုး မကြာခဏ ကြုံရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘလော့ဂ်တွေကို သံယောဇဉ် ရှိလာပါတယ်။ ကျွန်မလည်း အားတာနဲ့ ကိုယ်တိုင် ဘလော့ဂါတယောက် ဖြစ်အောင် ဘလော့ဂ်တခု ဖွင့်ဖို့ အချိန်ယူနေတာ အခုထိ အချိန်လုလို့ မရသေးလို့ မအောင်မြင်သေးဘူး။ ကျွန်မကို ဘလော့ဂ်ဂါ တယောက်မဟုတ်ပေမယ့် စာဖတ်သူတယောက်အနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါ့ကို သတိတရ ရှိတဲ့အတွက်
အဟိ.... မှတ်တမ်းထဲမှာ များလည်းပါတယ်ဟ...။
သူငယ်ချင်း မခင်ဦးမေတဲ့.... ခွိ
အင်း ဝါသနာတူ ညီအကိုတွေမို့ အထွေ အထူးတော့ ပြောစရာ မရှိပါဖူး၊ ရင်ဘတ်မှတ်တမ်းကို ရင်ဘတ်နဲ့ပဲ စူးနစ်စွာ ဖတ်သွားပါတယ်။ အမြဲ ရောက်ဖြစ်တယ် ခြေရာမချမိတာပဲ ရှိတာပါ။ အခုဆို ကယ်လီဖိုးနီယားဆို တို့ အကိုကြီးအောင် ရှိတဲ့ နေရာပါလားတောင် တွဲမှတ်နေမိတာ။
((( Objection))) ((( Objection))) ((( Objection)))
မိန်းခေး တွေနဲ့ ရင်ဘတ် ခြင်း လုံးဝ(လုံးဝ) မတူပါ..
ကိုကြီးငယ် ရဲ့ရင်ထဲရှိတဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာ ထားပေးလို့ 
ကဗျာတွေ စာတွေ ဆက်ရေးပါ ကိုကြီးရေ ။
မမြင်ဖူးပေမဲ့မမြင်ရတဲ့သံယောဇဉ်တွေနဲ့ 
နှောင်ဖွဲ့ ထားတဲ့ ဒီ အသိုင်းအဝန်းလေး က
ကြိုက်တာရေး ၊ ကြိုက်တာဖွဲ့၊ ကြိုက်တာ ဆို
အားပေး နေမယ် ။
နားမခံသာ အောင်တော့ အော်နဲ့ နော် ။
အကိုရေးတဲ့ ကဗျာလေးတွေက အရမ်းအသက်ဝင်ပါတယ်...
ကိုယ်ဖြတ်သန်း ရမယ့်လမ်းတွေပေါ်က မီးပွိုင့်လေး လိုပါပဲ...
ရေးသမျှတင်သမျှ ပို့စ်တွေ အကုန်ဖတ်မယ်နော်...
အကိုအောင်သာ... “ရှစ်ကြိမ်မြောက်တမ်းတခြင်း” နှင်းကဗျာကို ခဏခဏ လာဖတ်ဖြစ်ရင်း၊ ဒီပိုစ့်လေးကို သတိထားမိသွားတာ..။
(တယောက်နဲ့ တယောက် စကားကောင်းကောင်း မပြောဖူးခဲ့ပေမယ့်)
ခင်မင်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ခံရတဲ့ ထဲ ညီမ နာမည်လည်း ပါလာလို့ တကယ် ၀မ်းသာပါတယ်။
နောက်များလည်း စိတ်နှလုံးသားချင်း ရင်းနှီး ခင်မင်ရတဲ့ ဘလော့ရေးသူ၊ဖတ်သူတွေ တိုးပွားလာဦးမှာ မို့လို့.... အကို့ မှတ်တမ်းကတော့ မကြာခင် ထပ်ချဲ့ ထွင် မှတ်တမ်းတင်ဖို့ လိုလာဦးမယ် ထင်ပါတယ်။း)
အဟမ်း ...အဟမ်း.. နောက်ကျမှရောက်လာရလို့...လူတွေသတိထားမိအောင်
ချောင်းဆိုပြရတာပါ..အစ်ကို မစ်စတာ ဂျူနီယာအောင်သာရေ...
ပြီးတော့ စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ အသစ်၊အသစ်တွေကို မျှော်နေဆဲ...နော့အစ်ကို.။
အကို့မှတ်တမ်းထဲပါလို့ ၀မ်းသာနေတာ..၀င်လို့မရလို့ အခုမှပဲ..။ အကိုရေးချင်တာသာ ရေးပါ။ ကဗျာဖြစ်ဖြစ်..စာပဲဖြစ်ဖြစ်..သီချင်းလေးတွေကလည်း ကိုယ့်အကြိုက်တွေပဲ ဆိုတော့ ဒီမှာ နားထောင်လို့မရလည်း esnips မှာ သွားနားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဘလော့ဂ်မိသားစုလေး ဖြစ်လာကြတာကို တွေးပြီး ၀မ်းသာနေတာ..။ အရင်ကလည်း မသိခဲ့..နောက်အပြင်မှာတွေ့ဖြစ်ဖို့ မသေချာပေမယ့် စာတွေဖတ်ပြီး ရင်ဘတ်ချင်းတူတာ ခံစားမိတော့ ဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မပါတဲ့ ခင်မင်မှုလေးတွေအတွက် အကို့ဘလော့ဂ်လေး ဆက်လက် ရှင်သန်နေပါစေလို့ ဆုတောင်းနေပါတယ်။
ကိုအောင် သင်းကွဲဝံပုလွေတွေက သူတို့အချင်းချင်းခံစားချက်ကိုနားလည် ခံစားသဘောပေါက်တယ်၊ ရင်ထဲကအသံတွေ ခံစားချက်တွေကို အမြဲရထားဖြစ်နေပါတယ်လို့....။
"ရင်ထဲရှိတဲ့မှတ်တမ်း" ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်တော့မှ ကျနော်ဟာ ကိုကြီးဖန်တီးလိုက်တဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါ ကမ္ဘာလေးထဲက ရင်ဘတ်တူ ကမ္ဘာသား တစ်ယောက်ဖြစ် နေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်တယ်။ ကိုကြီးရဲ့ ဘလော့ဂါ ကမ္ဘာလေး ထဲမှာ ကိုယ့်နာမည်ကို ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေ နဲ့အတူ အခုလို အတူဖော်ပြခံရတော့ နွေးထွေးမှုဆိုတဲ့ အရသာကို ခံစားရတယ်။
ကျနော်လည်း ဒီလိုပါဘဲ။ ရေးစရာတွေကတော့ ရင်ဘတ်ထဲမှာအပြည်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခုတလော ပို့စ်တွေ သိပ်ပြီးမတင်ဖြစ်ဘူး။ ကိုကြီးရေးနေတာတွေကို စောင့်ဖတ်နေပါတယ်။